လုပ်ဖို့ဘယ်လို - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လို DIY လုပ်မလဲ၊
အရာဝတ္ထုများကိုခြစ်ရာကနေဖန်တီးပါ၊ ရှိပြီးသားအရာများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် hack ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုသူတို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်အရာများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာများအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးချခြင်းတို့မှ၎င်းတို့ကိုသူတို့အသုံးချနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနိုင်ပါ။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ကွိုင်မှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ ရရှိနိုင်သည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အိမ်လုပ်လုပ်နည်းသည် ယခုတွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြွေရည်သုတ်ထားသော ကြေးနီဝါယာကြိုးနှင့် အူတိုင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ထည်ကဲ့သို့သော အရာများ၊ ဝက်အူ သို့မဟုတ် သံကဲ့သို့ သံလိုက်ဓာတ်တစ်ခုခု လိုအပ်ပါသည်။
သံလိုက်ပြုလုပ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့ပြုမူပုံပေါ်မူတည်၍ ဖာရိုသံလိုက်၊ ပါရာသံလိုက်နှင့် ဒိုင်ယာသံလိုက်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စမ်းသပ်ချက်သည် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့် ကလေးများနှင့် ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာလောကကို မိတ်ဆက်ပေးပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ် ရေကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါင်းထည့်နည်း. ပေါင်းခံရေသည် အဘယ်အရာ၊ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် အခြားရေအမျိုးအစားများနှင့် ကွာခြားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရေပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါင်းခံရေဟူသည်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေစက်ရေ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော အညစ်အကြေးများနှင့် အိုင်းယွန်းများနှင့် ဆားများကို ဖယ်ရှားသည့် ရေဖြစ်သည်။
အားလုံး ပေါင်းခံနည်းများသည် ရေကိုအခြေခံသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း၏ အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းတွင် ဖြစ်သည်။
ပေါင်းခံခြင်း သည် ခွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဓာတု တုံ့ပြန်မှု မဟုတ်ပါ။
ဒီနွေရာသီမှာငါတို့အတွက်ဆိုဖာအဟောင်းတစ်လုံးကိုပြောင်းလိုက်တယ် ငါတို့က pallets ကနေလုပ်ထားတယ်မရ။ အမှန်တရားကငါ့ရဲ့ပရောဂျက်မဟုတ်၊ စိတ်ကူး၊ ဆန္ဒနဲ့အလုပ်ကိုငါ့ဇနီးကတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ pallets တွေကိုရွှေ့ပြီးစုရုံးပြီးတာနဲ့တစ်ရေးအိပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရည်စူးတယ်။
Pallet ဆိုဖာများသည်ဖက်ရှင်ကျသည်မရ။ ၎င်းတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ လှပသည်၊ တည်ဆောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးလှေကားထစ်များနှင့်ဥယျာဉ်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုအသုံးများတာမို့သူတို့ကအဲဒါကိုတပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်ကူရှင်တွေကိုတပ်ဖို့ရောင်းတာ။
အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုငါတို့ရွေးပြီးပြီ။ pallet ဆိုဖာများပေါ်တွင်မူကွဲများစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောကဏ္ several များစွာရှိသည် DIY နှင့် pallets များ y ပရိဘောဂများနှင့်အတူ Pallets
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လုပ်နည်းကိုကြည့်ရအောင် အဝတ်အထည်များနှင့်ရေခဲမုန့်တုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကလေးများအတွက်ကက်ပုတ်။ ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်အမျိုးမျိုးသော projectile အမျိုးအစားများစတင်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းနှင့်အတူအချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေး၏အသက်ပေါ် မူတည်၍ သမိုင်းနှင့်စစ်ပွဲများတွင် Catapult များအကြောင်းကွဲပြားသောအယူအဆများနှင့်အချက်အလက်များကိုရှင်းပြရန်အခွင့်အရေးယူပါမည်။
မင်းကိုငါလုပ်ဖို့သင်ပေးတော့မယ် အလွန်ရိုးရှင်းပေမယ့်အလွန်ထိရောက်သောကော်ဖီတောင့များအတွက်ယိုစီးမှု။ အရမ်းရိုးရှင်းလွန်းလို့သင်ခန်းစာလုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်ကိုကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကတစ်ဆင့်ချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ခုတည်းအဆင့်ပဲ။ ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရာဝတ္ထုတွေနဲ့လူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့နေ့စဉ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုငါနှစ်သက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ကော်ဖီသောက်တဲ့သူတိုင်းမှာငါ့မှာ Dolce Gusto ဟာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆေးတောင့်ကိုမပစ်နိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကညစ်ညမ်းစေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချည်းနှီးဖြစ်သွားပြီးအမှိုက်သရိုက်တွေကမင်းဆီကနေယိုစီးလာလို့ပါ။
သင်ကကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူဖြစ်လျှင်ကော်ဖီကင်လုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဆောင်းပါး ၂ ကိုသင်စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်
ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ Cooph ၏ဓာတ်ပုံသည်ဗီဒီယိုကိုလှည့်စားသည် ငါစာရင်းသွင်းတက်အဆုံးသတ်ချည်ဆွဲ ယင်း၏ Youtube ကိုရုပ်သံလိုင်း သူအသုံးပြုသောလှည့်ကွက်များ၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်သူတို့ရရှိသောရလဒ်များကိုအံ့အားသင့်စေခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတာကရဖို့ပါ အံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အသစ်သောအရာများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာကိုကြိုးစားရန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆုံးမှာတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့အပျော်တမ်းသမားတွေသုံးခဲ့တဲ့တူညီတဲ့လှည့်ကွက်တွေကိုအသုံးချခြင်းမှာရရှိတဲ့ရလာဒ်တွေဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါထင်တာကတော့ငါတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဖြစ်မှန်စာရင်းကိုပေးလိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်
ငါတို့အုပ်စုအားလုံးကိုအုပ်စုဖွဲ့ဖို့အခွင့်အရေးယူတယ် DIY သင်ခန်းစာများ4ဆောင်းပါးများနှင့်အတူတူအပိုင်းအတွက် DIY ဓာတ်ပုံ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စာရင်းထဲတွင်နောက်ထပ်အနည်းငယ်လှည့်ကွက်ရှိသည်။
အိမ်လုပ် dehumidifier ပြုလုပ်နည်း
မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ယန္တရားများမပါဘဲရိုးရှင်းသောအိမ်လုပ်။ လုပ်ကြရအောင် အစိုဓာတ်ကိုဖမ်းယူဖို့ dehumidifier ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီရိုများ၊ အခန်းများ၊
ကျနော်တို့ dehumidifiers2အမျိုးအစားများအကြောင်းပြောဆိုနိုင်:
silica gel အသုံးပြုသောအညစ်အကြေးများ
သင်သိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် hardware store များနှင့် high-end စတိုးဆိုင်များသည်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်သောပလပ်စတစ်သေတ္တာများကိုရောင်းကြသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် Viking ဘီယာခွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မင်းက cervercero လား ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းရဲ့အိမ်မှာပျောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည် ... ကြည့်ကြစို့ ဗိုက်ကင်းဘီယာခွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.
“ ဗိုက်ကင်း” သည်သင်ခန်းစာအရဗိုက်ကင်းများကထိုအရာကိုကျွန်ုပ်မပြုလုပ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကလိုင်စင်ကိုယူတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာ Instructables ထဲကအရမ်းကောင်းတဲ့ DIY ပါ။
ပုလင်းကိုသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြေခံကိရိယာများ၊ ပုဆိန်နှင့်ဓားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရွေးချယ်ထားသောထင်းသည် elderberry ဖြစ်သည်။ သစ်သားရွေးချယ်ရာတွင်သစ်သား၏စပါးနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်ထင်းထင်းမဟုတ်ဘဲစပါးစေ့များနှင့်အပြိုင်သွေးပြန်ကြောများဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ကလေး Wipes လုပ်နည်း
သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်အသုံးပြုလိမ့်မည် ကလေးအနှီး ထိုအရာများအနက်မှတစ်ခုမှာသင်စမ်းသပ်မှုများအပြီးတွင်သင်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသွားမည်ကိုသင်သိသည်။
ငါသင်ခန်းစာယူလာ စိုစွတ်သောသုတ်လုပ်နည်း, ငါတို့ကလေးနှင့်အတူကောင်းစွာသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းသုံးဘို့ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ « caserotes »၏ DIY ။
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသုတ်များကိုအလွန်စျေးပေါပါသည်။ စီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများကို၎င်းနှင့်အစားထိုးရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်ကုန်သွားပြီးစတိုးဆိုင်များကိုပိတ်ထားလျှင်သို့မဟုတ်ခရီးထွက်ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွင်တစ်စုံတစ်ခုရှိပါကမှန်ကန်သည်။ စီးပွားဖြစ်သုတ်၌တွေ့ရှိဓာတုပစ္စည်းမှသည်းမခံသို့ဖြစ်လျှင်ဤသင်ခန်းစာသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သည်။